मेलम्ची पानी काठमाडौं आइपुग्न अझै २ वर्ष लाग्ने ! – rastriyakhabar.com
मेलम्ची पानी काठमाडौं आइपुग्न अझै २ वर्ष लाग्ने !
काठमाण्डौँ – मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रमुख ठेकेदार इटालियन कम्पनी सीएमसी काममा नफर्किने भएको छ ।
गत मंसिर २९ गते आयोजनास्थल छाडेर प्रमुख म्यानेजर क्रिस्टियानो ग्रेकोसहित ८ जनाको टोली भागेपछि परियोजनामा अन्यौलता थपिएको थियो ।
क्रिसमस मनाउन भनेर इटाली फर्किन लागेका उनीहरूलाई आयोजना अलपत्र पारेर भाग्न खोजेको भन्दै सरकारले नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो । पछि काममा फर्किने शर्तमा उनीहरू इटाली उडेका थिए । तर इटाली गएपछि प्रमुख म्यानेजर क्रिस्टियानो ग्रेकोसहित ८ जनाको टोली सम्पर्कविहीन भएको खानेपानी मन्त्रालय स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो ।
‘हामीले उनीहरूलाई विभिन्न चरणमा इमेलमार्फत पत्र पनि पठाएका छौं । तर उनीहरूले कुनै पनि इमेलको जवाफ पठाएका छैनन्,’ खानेपानी मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अब उनीहरू नफर्किने निश्चित भएको जस्तो देखिन्छ ।’
सरकार धरौटी जफत गर्ने योजनामा
इटालियन कम्पनी सीएमसीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको २७ किलोमिटर सुरुङ खन्ने, मुहानमा मुख्य र सहायक बाँध बनाउने, सुरुङभित्र सटकिट राख्ने, सुरुङभित्र ढलान गर्ने, सुरुङ भित्रको हावा पास गराउनका लागि ३ ठाउँमा भेन्टिलेसन साफ्ट बनाउने, सुरुङको अन्तिम बिन्दु सुन्दरीजलमा भल्भ गेट राख्ने, सुरुङबाट प्रशोधन केन्द्रसम्म पानी पु¥याउनका लागि स्टील र डीआई पाइप राख्ने तथा सुन्दरीजलमा सुरुङभित्रको सफाइका लागि फ्लस आउटको संरचना बनाउने ठेक्का पाएको थियो ।